Paawul Pogbaa: Gurrachummaan arrabsamuunkoo caalaa na jabeessa - BBC News Afaan Oromoo
Paawul Pogbaa: Gurrachummaan arrabsamuunkoo caalaa na jabeessa
25 Hagayya 2019
Goodayyaa suuraa Pogbaa, Maguiree, Raashfoord
Taphataan sarara gidduu kilaba Maanchester Yunaayitid Paawul Pogbaa arrabsoon sababa gurraacha ta'uukootiin anarra gahu caalaa na jabeessa jedha.
Taphataan lammii Firaans kun arrabsoon akka kanaa sababii sanyiidhaan narra ga'u akkan cimee dhaloota dhufuuf qabsaa'u cimsee na kakaasa malee duuba akkan deebi'u na hin taasisu jedha.
Taphataan cimaa biyyi isaa akka Waancaa Addunyaa mo'attuuf guddaa gumaache kun tapha torban darbe Maanchester Yunbaayitid Woolviis waliin taphate irratti rukkuttaa penaaliittii hin lakkoofsisiin hafuu isaatiin miidiyaalee hawwaasummaarrati hedduu arrabsameera.
Pogbaan gurraachummaa isaan arrabsoof saaxilame
Lukaakuu moo Poogbaa?
Hiriyyoonni garee Pogbaa keessa jiran hedduun isaanii arrabsoo isarra ga'e kanas balaaleffatanii turan. Manaajerri garee Kubbaa Miilaa Dubartootaa Ingilaand Fiil Neeviil ammoo taphattoota kubbaa miilaa akka miidiyaalee hawwaasaa "lagataniif" waamicha dhiyeesseera.
"Warri sanyiidhaan nama arrabsan doofaadha," jedha taphataan umurii ganna 26 Pogbaan.
Erga tiwiitera irratti barreesseen: "Akaakayyoonnikoofi maatiin koo dhaloonni ani amma keessa jiru akka bilisooman, hojii namaan qixa hojjetan, walqixa konkolaataa umataa fayyadamamaniifi kubbaa miilaa taphachuu danda'an gatii hedduu baasaniiru," jedhe.
Pogbaan ergaa isaa tiwiteraa kana yeroo qoodu suura mucaa ilmaa isaa baaddhatee suura qabsaa'ota mirga walqixxummaa guraachotaa durii kan akka Faassoo Antooniyoofi Maartiin Luutar Kiing bira dhaabbatee kan ka'een deggereeti.
Erga Adoolessaa Pogbaan tiwiitera irratti yeroo barreessu isa jalqabaadha.
Sanbata darbe Manaajerri Maanchester Yunaayitid Ole Gunnar Solskjaer namoonni sanyummaaadhaan nama arrabsan warra maqaa sobaan dhokatanii arrabsoo sanyummaarratti xiyyeeffate maxxansanidha jedhe.
Hiriyyaan Pogbaa garee tokko keessa waliin taphatan Maarkus Raashfoordillee akkasuma arrabsoo sanyummaaf saaxilameera.
Raashfoord tapha Sanbata darbe Maanchester Yunaayitid Kiristaal Palaas waliin taphatanii mo'amanirratti innillee rukkuttaa penaaliitti dhabuu isaatiin ture kan gurraachummaa isaatiin arrabsame.
Kun arrabsoo sanyummaa afraffaa torban lama keessatti uumamedha.
Taphataan sarara duraa Chelsii Taamii Abrahaam, akkasumas kan garee Riidiing Yaakuu Me'itees ergaa arrabsoo sababa gurraachummaa isaaniitiif isaanirra ga'eera.
Taphattoonni kunneen kan gurraachummaa isaaniitiif arrabsamanis rukkuttaa peenaaliitiii taphoota dhiyeenya keessatti lakkoofsisuu dhabaniidha.
Miidiyaa hawwaasummaa beekamaa Tiwiiter ammoo rakkoo kana dursee ittisuuf, akkasumallee ittisuudhaaf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin "durseen socho'a," jedheera.
Waancaa Addunyaa 2018: Lukaakuu moo Poogbaa? Beeljiyeem moo Faransaay?
10 Adooleessa 2018
Piriimer Liigii Ingiliz keessatti maaltuu odeeffamaa jiraa?
16 Waxabajjii 2019
Wadaajii - dhungoo, karameellaa, shaashii...
‘Barumsa sadarkaa tokkoffaa miti lammaffaanu afaan dhalootaan ta’u qaba’
Ameerikaan haleellaa boba'aa Sa'uudii irra ga'eef Iraan komatte
Ilmi Bin Laadin akka du'e Tiraamp mirkaneessan
Diraamaan 'Min Littaazaz adda hin citne' jedhe Faanaan
Sirni gaggeessaa Mugaabee hoggantonni Afrikaa lafa argamanitti raawwatame
Haleellaan diroonii warshaalee boba'aa Sa'udiitti ibidda qabsiise
Barattoonni 10,000 ol qormaata biyyaalessaa kutaa 10ffaa qabxii 4 fidan